Amathuba Mining 2018 - Blockchain News
Ingqalelo ukukhula cryptocurrency, imfuno izixhobo imigodi liye landa ngokunjalo. Kwiminyaka embalwa edlulileyo bonke abantu ukufikelela ngokwaneleyo ikhompyutha enamandla ukuba abe wasemgodini, lo gama kulo nyaka uphelileyo meko itshintshe kakhulu kwaye iindlela zangaphambili kwemigodi sele baba angabi. Siye ndaxela imigodi iintsingiselo kuya kuba ethandwa 2018.
Amakhadi yemizobo kwemigodi
Namhlanje izixhobo luyabiza iyafuneka ukuze kwemigodi, ukuthi ngqo, amakhadi graphics. Last Juni Chinese online iqonga yorhwebo AliExpress ingxelo ukuba abasebenzisi bayo baqalisa ukukhangela ngakumbi ngenxa imifuziselo ezithile zamakhadi iigrafiki ezibe kakhulu efanelekileyo ngokudala iifama zemigodi. Imifuziselo ebezisaziwa mgodini Russian na amakhadi-GeForce graphics Nvidia GTX 1060 no GTX 1070, kwakunye ne Radeon RX480, elalenziwe Devices Micro Advanced (AMD).
Ekubeni zithandwa ezi modeli kungekuphela phakathi mgodi Russian, nyaka uphelileyo kwaphawula izabelo AMD kuse ekutshoneni yi 64%, ngeli xesha ixabiso Nvidia Corporation izibambiso wazuza phantse 88% ukususela ekuqaleni 2017. Iingcali zithi ukukhula kubalelwa ukuba inani elandileyo mgodini ye kuthungelwano Ethereum kunye nezinye cryptocurrencies ethandwa. Nvidia epapashwe data ebonisa 6.7% lwengeniso ngekota yesibini ka 2017 yafunyanwa graphics amakhadi yokuthengisa, ezo zasetyenziselwa kwemigodi crypto. Kungenxa yoko le nto ezi nkampani zimbini kunye nenkampani Asus sele iqalile ukuba akhuphe amakhadi yemizobo ezizodwa ezilungiselelwe imigodi cryptocurrency. kwakhona, ihlobo last sasisazi ukuba AMD wayesebenza phezu 7nm 48 iprosesa core ebizwa starship ukuba akhululwe kulo 2018.
iingcali, kunjalo, alumkise imigodi abenzi izixhobo linganyanzelisa ukuba iimveliso zabo iza nciphisa. Ngokutsho ku Joseph Moore, ngumhlalutyi e American ebhankini ephethe inkampani Morgan Stanley, imigodi babe umsebenzi engeluncedo lwanto ngokwezoqoqosho ku 2018.
“Sikholelwa ukuba zokuthengisa yemizobo ewonke imigodi ethereum ku 2017 iya kuba $800 million okanye ukuze, kwaye uya lehle nge 50% ngo-2018.”
Ngokubona Moore ukuba, isizathu lokuqala yokukwehla yi ukuhla okucwangciselwe kwibhloko umvuzo uwonke kwi-network ethereum evela 5 ETH ukuba 3 ETH. Eyesibini kungaxhomekeki Ubungqina Work (POW) ukuba Ubungqina esibondeni (PoS) xa kunokuba amandla zemigodi, amathuba yokudala ibhloko kunye nokufumana umvuzo enxulumene kisekiyo kubunini esibondeni umsebenzisi kwinkqubo. Vijay Rakesh, ngumhlalutyi ngaseludinini yotyalo-Japanese Mizuho, wandibuza lo mkhwa kakhulu. Uyaqiniseka ukuba kwisiqingatha sokuqala 2018, azisazi kufuneka amakhadi yemizobo imigodi cryptocurrency efana nokombiwa kaEtere.
“Sikholelwa ukuba ethereum ukhangela ukuya inkqubo eyahlukileyo lokuqinisekisa yentlawulo kwiinyanga ezintandathu ezilandelayo, ukusuka Ubungqina-of-Sebenza kunye nokusetyenziswa amakhadi nemizobo ukuya Ubungqina-of-esibondeni apho amakhadi yemizobo akukho ingasafuneki.”
Le projekthi ye kancincane imvumelwano protocol of network Ethereum kuthiwa Casper. Libonisa ukuba izixhobo zekhompyutha ezizodwa akufuneki kwakhona ukwenza ibloko entsha; kunokuba, abasebenzisi baya kuba nako ukunika eyakhe imali yabo yayiza engumkhenkce okwethutyana, yaye imbuyekezo, baya kufumana ithuba lokuthatha inxaxheba kweentengiselwano yokuqinisekisa. Ngaloo ndlela, Casper iya kudala inkqubo nako ukumelana yinye kwemigodi. Xa eConstantinople ifolokhwe elandelayo, apho kunokwenzeka ekuqaleni 2018, ithatha indawo, uhlaziyo network Ethereum ziza kuvuselelwa.
Nangona utshintsho enokubakho xa imvumelwano protocol of network Ethereum, intloko Nvidia, juan Zhjensjun, liqinisekile ukuba ingeniso eyenziwe GPU (unit processing yemizobo) kwentengiso kwemigodi crypto wayeza kuhlala, cryptocurrencies ngelithi kunye blockchain are “apha ukuze ahlale.”
“Le kwimarike ekujoliswe kulo akunakufane kwenzeke ukuba emke nanini kungekudala, kanye into kuphela esinokuthi mhlawumbi silindele na ukuba kuya kubakho iimali ezingaphezulu ukuza. Iya kuza yonke eninzi yeentlanga ezahlukeneyo. Kuya kuvela amaxesha ngamaxesha, kwaye GPU ngenene kakhulu ezinkulu kuyo.”
.GOKO (Isicelo-esikhankanya Integrated Circuit) oziqu ngendlela chips wadalwa ukuze kwemigodi olusebenzayo kwakunye. ASICs asetyenziswa isixhobo ethile kunye nokwenza imisebenzi kuphela ngokungqongqo, leyo eyenza ekwenzeni le misebenzi nakho ngokukhawuleza. Engenelela anamandla kakhulu kwaye zitya amandla kancinci kakhulu; ukuba amaxesha amaninzi nenzuzo ngaphezu amakhadi graphics. Ngaphezu, Iifama imigodi kufuna ixesha elininzi esilichitha ibandla kunye nokugqitywa, ngoxa ukunye .GOKO-mgodini wena ngomumo.
Lo nyaka Wayehlatyelwe ukuba iinkampani, ezifana Samsung, Intel, TSMC, kunye Foundries Global, zaye asakhasayo chips 7nm for kwemigodi .GOKO. imveliso chips ucwangciselwe kwikota yokuqala 2018. Baya iphucule nocikizeko amandla xa kuthelekiswa ne engenelela 14nm yangaphambili.
Japanese Internet giant yeMfuzo zokusungula indawo .GOKO-miner ezintsha luya kusekelwa phezu chips 7nm. Ubunzima imveliso chips nale thekhinoloji icetyelwe May 2018. kunyaka olandelayo yeMfuzo uza kuphehlelela ICO ukuba athengise iibhodi imigodi elandelayo-isizukulwana. Baya kukhupha imiqondiso njengendlela yokuthenga iibhodi imigodi elandelayo-isizukulwana. ngaphandle, inkampani uceba ukwakha iziko lemigodi in Northern Europe:
“Siza kusebenza iziko kwemigodi elandelayo-isizukulwana kusetyenziswa amandla yeqondo eliphezulu ehlaziyekayo chips semiconductor in Northern Europe. Siza kusebenzisa yeqondo eliphezulu 7nm inkqubo nobuchwepheshe iitshiphusi ukuba asetyenziswe kwinkqubo kwemigodi, yaye ngokudibeneyo ukusebenza uphando kunye nophuhliso kunye necandelo lokuvelisa kunye neqabane lwethu manyano ukuba semiconductor technology kuyilo.”
September Last, Russian lizoba Coin (RMC) ICO olwenziwe ukuxhasa ukuveliswa a Sunrise entsha wasemgodini nge chips Bitfury nokuphuhlisa omnye wasemgodini entsha Multiclet kunye chip efanayo. I ICO eqokelelwe $43.2 million. RMC ibandakanya 15 Osomashishini kunye cryptocurrency abagayi esihlanganisa iinkampani ezine, kubandakanya MultiClet, SMARTHEAT, GOODWIN, no RadiusGroup. Le nkampani iye yaqala imveliso wasemgodini Sunrise kunye, yi ihlobo elilandelayo, linenjongo ukuphuhlisa elilandelayo-isizukulwana iprosesa Multiclet, leyo eya kuba 35 amaxesha kakuhle kakhulu kwemigodi.
Kuyabonakala ukuba izixhobo enamandla kwaye iyabiza, i kakhulu i-eneji idla kakhulu, efunekayo ukuze kwemigodi ngempumelelo. Kungenxa yoko le nto iinkampani ziye enye uhlobo kwemigodi, ebizwa imigodi yelifu. Iinkampani kunye namaziko data enamandla ukunika izixhobo, kwaye ukuqasha izixhobo zabo kumboleki wokugqibela. Xa ikhontrakthi kuphothulwe kunye nezi nkonzo mazihlawulwe, iinkampani ezifana Hashflare, Genesis Mining yaye IQMining Ukubonelela ngokwazi ukufikelela kuzo emigodini cryptocurrencies ezininzi.
Ezi nkonzo sele ezithandwayo. Akukho sizathu sokukholelwa ukuba lo mkhwa bazakucotha ku 2018, njengoko imigodi yelifu i efikelelekayo, ethembekileyo, kunye nendlela elula ukufumana cryptocurrency, engadingi ukuba naziphi na izixhobo ezixabisa. Kukho ezinye iingxaki xa kunokwenzeka. Umthengisi kwezivumelwano imigodi yelifu kungaba okungalungile; indawo ebonelela olu hlobo lwenkonzo banokuziva bengakhuselekanga esihlasela lokubulala; abasebenzisi akukho ukulawula imali Ikhomishini befumana ukuba kwemigodi; kananjalo, ilahleko ezingacwangciswanga unokukunyanzela iziko data ukuhlawula ngaphantsi emva abasebenzisi bayo phantsi izivumelwano ezilandelayo.
kungoku nje, akukho imithetho elawula umsebenzi kwemigodi eRashiya kunye namanye amazwe nokuba. UMongameli umthetho Russian, kunjalo, uthi uRhulumente kunye Central Bank kufuneka ukumisela irhafu nocwangco yobhaliso iinkampani zemigodi ihlobo elilandelayo. Eli phulo liya mhlawumbi ujonge kuzo zombini iinkampani kunye mgodini zabucala.
ngoDisemba, uMkomishinala phantsi uMongameli Russian Federation on ukukhuselwa kwamalungelo koosomashishini, boris titov, kucetywa ukuba angenise irhafu kwimigodi crypto ngomlinganiselo 14%.
UKUCHITHA: BItcoin Price Breaks Past 13k | Ethereum on iPhones | Vechain + WalMart | CNBC BULLISH
Isilimela 26, 2019
UKUCHITHA: BItcoin Price Breaks Past 13k | Ethereum on iPhones | Vechain
Isilimela 25, 2019
altcoin AltCoin Buzz altcoin imihla altcoins bitcoin Uhlalutyo bitcoin bitcoin bullish Bitcoin yokukhubazeka crash bitcoin phezu iindaba bitcoin bitcoin iindaba namhlanje bitcoin prediction ixabiso Bitcoin ukukhula kwamaxabiso bitcoin bitcoin ixabiso news Uhlalutyo bitcoin technical bitcoin namhlanje block chain BTC iindaba BTC BTC namhlanje cardano crypto cryptocurrency market cryptocurrency cryptocurrency news cryptocurrency trading iindaba crypto video ethereum Uhlalutyo ethereum iindaba ethereum ixabiso ethereum indlela yokwenza imali imali imali bitcoin imali ye crypto into bitcoin kwenziwa mabahlambe litecoin neo iindaba yama- sinh xa ukuthenga bitcoin xrp